#Madagascar : Fitsipika vaovao – Tsy afaka hifindra kaoperativa hafa intsony izay taksibe voasazy | ONG Lalana Blog
#Madagascar : Fitsipika vaovao – Tsy afaka hifindra kaoperativa hafa intsony izay taksibe voasazy
Tsy hisy intsony ny famindram-po ho an’ireo mpitatitra manao hatsirambina ny asany. Hevitra nivoitra nandritra ny fijoroan’ny federasionan’ny mpitatitra an-drenivohitra sy ny manodidina (FE.TR.S.U.A) izany.
Hisy ny fanavaozana ny karatra maha matihanina tokana, hiraisan’ny kaoperativa rehetra, ary natokana ho an’ny mpamily sy ny mpanampy azy. Raha misy hadisoana ataon’ilay mpamily na ny mpanampy azy dia hosintomina avy hatrany io karatra io ary tsy afaka hiasa amina kaoperativa hafa intsony izy ireo, araka ny fanazavana azo avy amin’ity biraon’ny federasiona vaovao ity. Hiara-hiasa akaiky amin’ny fanaraha-maso ny asan’ireo mpitatitra ny federasiona, ireo tompon’andraikitry ny kaoperativa, ny mpanjifa ary ny mpitandro filaminana.
« Azon’ny mpitandro ny filaminana atao ny maka io karatra io raha misy ny fahadisoana », hoy Rakotoarimanana Fidimalala, filohan’ny fivondronan’ny mpitatitra ivelan’ny renivohitra sady mpikambana ao anatin’ilay federasionan’ny mpitatitra, raha niaiky ny fisian’ny lesoka teo aloha. « Mpitatitra efatra no efa tratran’io sazy io ary efa tsy afaka miasa amina kaoperativa hafa intsony. Tatitra avy amin’ny mpanjifa no nahafantarana ny fandikan-dalàna nataon’izy ireo », hoy kosa Andriambinintsolomora Bernardin, filoha lefitry ny vondron’ny mpitatitra an-drenivohitra no sady filohan’ny federasiona.